I-Mini -Studio # 3 yedolobha elinendawo yokupaka !! - I-Airbnb
I-Mini -Studio # 3 yedolobha elinendawo yokupaka !!
Xalapa-Enríquez, Veracruz, i-Mexico
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Carlos A
U-Carlos A Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuhlala itholakala kusethi yeMini-Studios ezimele exhunywe endlini, itholakala eduze nendawo yedolobha, ine-SPEED INTERNET, eduze ne-CLINICS, ukufinyelela kalula kwezokuthutha zomphakathi, iyindawo ethokomele, ethule. futhi OKUPHEPHILE lapho ungachitha kokuhlala ezimnandi kakhulu njengoba kuyinto ethokomele kanye Sebawoti ezinhle abayokwakha uzizwa ekhaya; Vele, ngemithetho nezincomo zayo ezifanele zokuphila kokujwayelekile okusha kwe-Covid-19.
Indawo ethokomele, enakho konke okubalulekile ukuze uhlale unethezekile, futhi ngaphezu kwakho konke UKUPHEPHILE, sinezinsizakalo ezimbalwa:
DLULISA UMA UFIKA E-XALAPA:
Sinesevisi yezokuthutha lapho ufika eMini-Studio, sizokulinda lapho ufika esiteshini samabhasi e-CAXA (sicela uhlole ukutholakala kusengaphambili).
Izindleko: $ 70 pesos.
Sinesevisi yokupaka enesango likagesi lemoto eyodwa noma iloli eliphakathi (sicela uhlole ukutholakala kusengaphambili).
Izindleko: $ 30 pesos amahora angama-24.
Sivikela umthwalo wakho uma kwenzeka ufika ngaphambi kokungena noma uhamba ngemva kokuphuma.
Sinendawo lapho ungazivocavoca khona (sicela uhlole ukutholakala kusenesikhathi).
Indawo yakudala yaseXalapa, endaweni emaphakathi kakhulu, ephephile, eduze kwegquma laseMacuiltépetl, ekwazi ukufinyelela ezitolo, izimakethe zendawo, enemizila emikhulu kanye nezithuthi zomphakathi emamitha ambalwa ukusuka e-esstancia.
Ibungazwe ngu-Carlos A
Ngizotholakala uma izivakashi zingidinga, ngithanda ukuzijabulisa kodwa ngihlale ngihlonipha ubumfihlo nenkululeko yezivakashi!
UCarlos A Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Xalapa-Enríquez namaphethelo